Niara-nitsidika ny ozinina famokarana zava-pisotro STAR tany Antsirabe ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana Rakotomalala Lantosoa sy ny Tale Jeneralin’ny STAR, Marc Pozmentier, ny Talata 18 aogositra lasa teo. Notanterahan’izy ireo nandritra izany fitsidihana izany ny famerenana ny fampandehanana indray ny asa famokarana.Manantena ihany koa ny STAR fa hiverina hiodina tsy ho ela ny ozinina Ambatolampy, izay nitsahatra tsy niasa nanomboka ny voalohan’ny volana mey. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 17 août 2020 16:41
Fandraharahana: Tsy voaloa ny fameranam-bola, ny banky tsy te halala
Maro ireo orinasa na olon-tsotra nitrosa vola tamin'ny banky na micro-cred, izay nametraka antoka, nefa noho ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny krizy nateraky ny valan'aretina Covid-19, dia very asa, na mikatona ny orinasa, dia tsy voaloa ireo trosa eny anivon'ny mpampindram-bola. Nisy ny kabarin'ny Filoham-pirenena ny ampiatoana ny fitakiana ireo trosa, nefa tsy narahina didim-panjakana izany, ka dia mody manao be marenina ireo banky sy micro-cred. Betsaka ireo tompon'ny orinasa no kivy sy miraviravy tanana, tsy mahita izay ho sarangotina, fa dia miandry ny fidonany sisa, misy ireo mamoifoy mihitsy aza, mandraiky marary.
lundi, 17 août 2020 13:51
Faritra ATSINANANA: Fametrahana « PEPINIERE AGRICOLE » isaky ny Distrika
Fanambin’ny ekipan’ny Governora RAFIDISON Richard Théodore ny hametrahana « PEPINIERE AGRICOLE » isaky ny Distrika manerana ny Faritra Atsinanana. Ilaina tokoa mantsy izany amin’ny fanamby lehibe hanaparitaka voly avotra sy voly fanondrana isan-karazany sy hampitomboana ny velaran-tany voavoly. Manomboka tsikelikely izany, ny DRAEP Atsinanana sy ny Sampana isaky ny Distrika koa moa efa nanomboka izany rahateo.
Namoaka naoty fampatsiahivana ireo lalàna misy ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana, tamin'ny 10 aogositra 2020, fa ireo mpanafatra entana azo hanina, na ireo mpamokatra eto an-toerana dia tsy mahazo mivarotra ireo entana azo hanina raha tsy nahazo fahazoan-dalana avy amin'ny sampan-draharahan'ny ministeran'ny varotra eny anivon'ny Faritra isan-tokony. Voakasik'izany ihany koa ireo mpampongady sy mpanelanelana izay raisina ho tompon'antoka ihany koa raha mivarotra entana azo hanina tsy nahazoana fahazoan-dalana mialoha. Ireo entana rehetra azo hanina tsy manana izay fahazoan-dalana hamidy izay dia giazina avy hatrany, ary esorina eny amin'ny tsena.
mardi, 11 août 2020 19:09
Tohana ho an’ny fizahantany: Tena adino tanteraka i Ranohira Isalo
Toerana manana ny lazany amin’ny fizahantany eto Madagasikara i Isalo, ao amin’ny Kaominina Ranohira, Faritra Ihorombe. Toerana faharoa mahasarika mpizahatany betsaka aorian’i Nosy-Be izy. Voadona mafy tao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus izao ny fizahantany ao Isalo. Mahatsiaro tena adino tanteraka ity faritra ity sy ireo mpisehatra ara-pizahantany ao an-toerana.
lundi, 10 août 2020 16:01
Nosy Be: Hisokatra amin'ny fiandohan’ny volana oktobra ny fizahantany
Nohamafisin’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandaharana manokana tao amin’ny Televiziona Malagasy omaly fa hisokatra amin'ny fiandohan’ny volana oktobra ny fizahantany ao Nosy Be. Afaka mandray vahiny ity tanànan’ny fizahantany ity, saingy voarara ho azy ireo kosa ny mivoaka an’io faritra io. Miomana amin'ny fomba hanaovana ny fanentanana amin'io hisokafan'ny zotram-piaramanidina hampifandray an'i Nosy Be amin'ny any ivelany ny mpiasan’ny serasera ao an-toerana ny zoma lasa teo, mampiray feo sy hiaraka hanao fanentanana mba hahalalan’ny mponina ny zava-misy sy ny tokony hatao.
lundi, 10 août 2020 15:59
Faritra Atsinanana, Distrikan'i Brickaville: Miroso ireo tetikasam-pampandrosoana maroloko
Na dia anaty hamehana ara-pahasalamana aza dia miroso ireo tetikasam-pampandrosoana maroloko, na ireo tanterahin'ny Fitondram-panjakana mivantana amin'ny alalan'ireo "projets Présidentiels", na ny tanterahin'ireo Departemantan'ny Minisitera samihafa, na koa ny tanterahin'ny ekipa tarihin'ny Governora RAFIDISON Richard Théodore amin'ny volan'ny Faritra madiodio. 1. Anisan'ny zava-bita tatoato: Lycée Technique ao Brickaville; BAC ao Andavakimena; manomboka mamokatra siramamy ny orin'asa SIRAMA ao Maromamy; fotodrafitr'asa fanamboarana siramamy gasy ao Vohitranivona; biraon'ny Kaominina Ranomafana; maro ireo zava-bita sy fampivondronana notanterahin'ireo "Projets-Programmes" toy ny PROSPERER, FORMAPROD, CASEF teo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ary fananan-tany, efa miasa ary voafefy tsara ny tsena lehibe...
lundi, 10 août 2020 12:32
Zimbabwe: Hanontona 500 tapitrisa dolara hanaingana indray ny fizahantany
Voadona mafy ny sehatry ny fizahantany tao Zimbabwe noho ny valanaretina coronavirus. Hanokana 500 tapitrisa dolara ny fanjakana ao an-toerana hanohanana io lalampihariana iray io. Isany mampalaza sy misarika mpizahatany any Zimbabwe ny « Chutes Victoria ».
Nanao fitsidihana ny Canal des Pangalanes tapany 20km miala an’i Toamasina mianatsimo, ny Governoran’ny Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore sy ny Préfet RAZAFIARISON Jean Jugus ary ny Talem-paritra sy mpiara-miasa vitsivitsy. Ny Ben'ny tanànan'ny Kaominina ambanivohitra Amboditandroho ANDRIANARY Thierry Didier sy ny ekipany ary ny mpanao tolotra ara-pizahantany CHRISMIA TOURS/EDEN GARDEN no nitarika ny fitsidihana.